Espaina: “Manana Fitadidiana Izahay, Mila Ny Rariny Izahay” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2012 22:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, বাংলা, polski, Svenska, Ελληνικά, Español
Mpitsara manana ny lazany ao Espaina, Baltasar Garzón, no voampanga ary voarara tsy hanao ny asany mandritra ny 11 taona noho ny fanomezany baiko ny fametrahana tsy ara-dalàna fitaovam-pandraisam-peo tao am-ponja mba hihainoana ireo resaka ifanaovan'ny voafonja sy ny mpisolovavany tamin'ny raharaha Gürtel. Raharaha mikasika ny fanodinkodinam-bolam-panjakana izay niafara tamin'ny fandroahana mpikambana am-polony tao amin'ny Antokom-bahoaka (Parti Populaire) izany (antoko ankavanana mitarika ny governemanta ankehitriny).
Voampanga ho nanao fahadisoana goavana nandritra ny fanatanterahana ny asany ilay mpitsara Garzón rehefa nanao fanambarana fa ao anatin'ny asany ny fanaovana famotorana mikasika ny famonoana olona nandritra ny ady an-trano espaniola sy nandritra ny fitondran'ilay mpanao didy jadona Franco; izay nahatonga ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena, mpanao politika ary olom-pirenena an-jatony naneho ny fahatafintohinany sy ny fahatairany noho ny didy nivoaka. Mbola tsy nisy ny fanasaziana ny heloka bevava nihatra nandritra ny ady an-trano sy nandritra ny fitondran’ ilay mpanao didy jadona Franco.
Nanambara ny tsy fankatoavany ny fandresen-dahatra tamin'ny filazana an-gazety ilay mpitsara Garzón: “Laviko tsotra izao ny didy navoaka nampahafantarina ahy androany“, nivoaka minitra fohy taorian'ny nandrenesany fa mamely azy ny fitondrana:
Nitafatafàna momba ity raharaha ity ny Solombavambahoaka teo aloha, Federico Mayor Zaragoza. Noho ny maha olona fanta-daza azy izay mavitrika tamin'ny fanohanany mavitrika ny hetsika ara-tsosialy #15M dia averinay etoana ny resadresaka nifanaovana taminy:
Olom-pirenena, gazety ary indrindra ny gazety iraisam-pirenena no tsy nino ilay didy navoaka ho an'ilay mpitsara Garzon, Mpitsara mpanao famotorana ao an-toerana voarara tsy hanao ny asany mandritra ny iraikambinifolo taona. Amin'ny teny fohy, ahoana ny hevitrao mikasika izany fanamelohana izany ?
Mampahonena. Araka ny efa nolazaiko imbetsaka, ary averiko ihany, tsy mbola nitolona ho amin'ny firenena tan-dalàna aho fa ho amin'ny Firenena tan-drariny. Ary ny Lalàna no mamela singa tsy mendrika sy mpamely ny demokrasia hanameloka mpitsara miezaka hitady ny fanaon'[ny fitondrana] tsy mifanaraka amin'ny lalàna, ary izany fanao izany no tokony ovàna.
Eritreretinao ve fa lojika raha tsy niafara tamin'ny fanokafana ny fanadihadiana tsy anavahana na iza na iza, tahaka ny tany Alemaina, arzantina, Shily ary ny firenena maro hafa, ny heloka bevava nisy nandritra 40 taona nitondran'i Franco?
Tsy azo heverina mihitsy. Ilaina amin'ny demokrasia tena izy sy ny fahamendrehan'ny olom-pirenena tsy misy anavahana ny tsiaron'ny tantara. Tsy mampahazo aina loatra raha saronana ny marina. Omaly ny mpanao fihetsiketsehana mpanohana an'i Garzón nihiaka hoe”manana fitadidiana izahay, mila ny rariny izahay”. Fa rehefa tsy mila ny rariny ry zareo dia ataon-dry zareo izay tsy hananantsika tsiaro.
Noarahabain'ny antsasak'izao tontolo izao ny Mpitsara Garzón rehefa nanokatra ny raharaha anenjehana an'i Augusto Pinochet (ilay mpanao didy jadona Shiliana efa maty) sy ny heloka bevava nataon'ny fitondrana Shiliana. Angaha isika mitehaka ny ataon'ny vahiny mody tsy mahita na minia tsy mijery ny tsy rariny atao ato amintsika?
Manana fijery miavaka tanteraka manerana izao tontolo izao ny Mpitsara Garzón. Nijery an'izao tontolo izao avy amina tilikambo aho izay mamela ahy hiantoka fa tsy ho vasoky ny fisainana maloto Espaniola ny lazan'ny Mpitsara Garzón manerana izao tontolo izao.
Azonao vakiana ato ny resadresaka tamin'ny fiteny niresahana azy.
Sekretera lefitry ny Fanabeazana sy ny Siansa tao amin'ny Governemanta espaniola (1974–1975) i Federico Mayor Zaragoza, solombavambahoaka UCD ho an'ny faritr'i Granada ao amin'ny Parlemanta Espaniola (1977–1978), Mpanolotsainan'ny Filohan'ny Governemanta (1977–1978), Minisitry ny Fampiarana sy ny Siansa (1981–1982) ary solombavambahoaka CDS ao amin'ny Parlemanta Eoropeana (1987). Faramparany, niasa ho Tale Jeneralin'ny UNESCO nanomboka ny 1987 ka hatramin'ny 1999 nandritra ny fotoampiasana indroa misesy. Izy amin'izao fotoana izao no sekretera jeneralin'ny Fikambanana Mpanao Asasoa ho amina Kolontsainam-pandriamphalemana sy mpikamam-boninahitry ny Taompolon'ny Fampiroboroboana ny Kolontsaina Mandala ny Fandriampahalemana Iraisampirenena sy ny Tsy fanaovana Herisetra Ny Ankizy Manerantany.